Ukuhamba, ulungiselela ividiyo-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2009 cadastre, Uhambo
Ndiye ndiphantse iveki ehambahambayo, kumsebenzi oqhelanisiweyo kwinkqubo yokwenza inkqubo equkethe ukufowunelwa kwevidiyo ekufuneka ihlangule inqobo yesimo senqubo yokusetyenziswa.
Ukufayilwa ngumhlaba onomdla, umdlalo wokukhanyisa, ukuzonwabisa kweziganeko zangaphambili, ukubanjwa kweziganeko ezisaphilayo, ukuphathwa kodliwanondlebe, ukukhutshwa, ikhonkrithi, ngamafutshane ... elinye ilizwe. Kuyadinisa, ishedyuli yomelele kangangokuba akabinakho ukujonga ii-imeyile ebusuku kwii-monit 15-intshi. Ukuphoswa ngunyana wam kunyaka wesihlanu wesikolo ukuya kuvavanyo lwezibalo ngaphandle kokubandezeleka okudinisayo ukusuka kubusuku obungaphambili… amaxesha emotweni, kuloliwe, ebhasini, ukubuyela ngexesha ukuze ndibambe inqwelo moya yam ngentsasa elandelayo eCharlotte… uf !
Kufuneka kube neendlela ezahlukeneyo zokusondela kwinkqubo enjengale, ngokukodwa le projekthi eyongezelwe kubamasipala be-27, yenziwe phantsi kwesiqinisekiso sokuthi i-cadastre isebenzise isixhobo sokusetyenziswa multifunctional koomasipala abangalinganiyo, ingahlawuliswa ngokuthe ngcembe kweendlela: imali, yomthetho, ukusetyenziswa komhlaba kunye noluntu.
Ukufakwa kolwazi kunye nobuchule bokuqulathiweyo kunokufana, kodwa ukuba nje akukho lusetyenziso lolwazi ngaphakathi kwemigaqo yomxholo, iya kuba luhlu nje kuphela, kukhethwa ukuba uhambe inyathelo ngenyathelo, kulwabiwo olungcono kunye nokukhula. Kananjalo ukungathobeli izikhombisi zokusetyenziswa kuchaza isikhokelo sokungaqali kwinqanaba apho umasipala angahlangabezani nemiqathango. Le nkqubo yenkqubo ichaza amanqanaba amane amaxwebhu aya kuba nawo:
Isigaba sokubuyisela. Chonga inkqubela anayo umasipala, ubonelelo ngezixhobo ezisisiseko nenkcazo yendlela. Ukumiswa kwedatha ukusuka kwiinkqubo zangaphambili, ukuhlalisana nabanye kunye nezigqibo zezopolitiko eziyimfuneko kwindlela yezemali.
Ukuvukela okukhulu Ukuphuculwa saveyi cadastral bedolophu namaphandle yi lwezibonelelo zendawo oluntu, ukuphunyezwa ubugcisa kulawulo data lwendawo, ukulungiselela izifundo-apreyizali ubunzima kunye noko ukwenza umhlaba ofumanekayo ukuba luncedo kule kugxininiswa kwemali.
Ukulingana kweenkqubo zokulawula. Izifundo zokubaluleka komhlaba, izityalo ezisisigxina, imida yokulawula; ukuzalisekisa ukugxilwa kwemali kwaye uthathe amanyathelo okuqala indlela esemthethweni. Apha ikwafuna ukulungelelaniswa kweenkqubo zangaphakathi ezinokuthi zinciphise ukusetyenziswa kwemigaqo-nkqubo kulawulo lwommandla.
Inkqubo yokuzinza. Ukunxibelelanisa iinzame neeprojekthi zengingqi ezinongenelelo kwingingqi ye-cadastral ukuqhubeka kweenkqubo, ukumiliselwa kwenkqubo kunye nokudala ikomkhulu lengingqi kwinqanaba loluntu elenza imodeli efanayo, nenkxaso yayo ikulungiselelo lweenkonzo, isebenzisa ubutyebi wabumba umntu. Kweli nqanaba, kunye nemimandla evuthisa iindlela zokuqala, khuthaza inkcazo yemigaqo-nkqubo yemimandla yokusetyenziswa kwe yokusetyenziswa komhlaba kunye nokudala isiseko solwazi kunye neenkqubo ukuba zibe negalelo lophuhliso loqoqosho lwengingqi (indlela yezoqoqosho nezentlalo).
Kuyadabuka kunye nesibindi sokunquma ngaphezu kweeyure ze-11 zokurekhoda ukuya kutsho kwemizuzu ye-20; Siyavuya ukuba ebusuku lwamagcisa zam endle baye ngakumbi na imbuyekezo kwazo kwezoqoqosho (leyo ngokunyanisekileyo ayibanga ezinkulu) okanye imeko olukhohlakeleyo geofumado mood (leyo iye nzima ngamanye amaxesha).
Isiqingatha seenyembezi sinobuganga bokushukuma xa besiva umbulelo wendalo koosodolophu, iintloko zobhaliso lomhlaba, abahlali, kunye neqela lamakhwenkwe abaphantse baphuma nje baba sisizukulwana sokutshintsha iinwele zethu ezingwevu. Kunye nabo kuye kwanelisa ukuhlala phantsi ukuba nitye isonka esitsha esenziwe nge-palmate, sineehagu zenyama yehagu enongwe ngokungcola okuphilayo. Nangona eli nqanaba leprojekthi lisasele ngaphezulu konyaka ... ndiyazi ukuba abanye babo ndiza kubabona koku iminyaka emininzi, njengoko benamandla okwenza ikhondo lomsebenzi kule ndawo; abanye ... Ndizobakhumbula.
Kwaye ngomso… ukuhamba kwakhona, ngotshintsho. Inqaku elilandelayo liza kuvela kwi- Uphefumulelwe.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Geographics: Faka ifayile yendawo
Post Next … InokwenzekaOkulandelayo »